हकप्रद सेयरका नाममा विकृति, व्यवस्थित गर्न जरुरीः कुबेर श्रेष्ठ, लगानीकर्ता - Arthasansar
शनिबार, १८ बैशाख २०७८, ११ : २९ मा प्रकाशित
सेयरबजारमा हकप्रद सेयरका नाममा विकृति मौलाएको अनुभवि लगानीकर्ता कुबेर श्रेष्ठको आरोप छ । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर श्रेष्ठ यसलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्ने बताउँछन् । झण्डै ३ दशकदेखि नेपालको पूँजीबजारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् ।
पहिलेको तुलनामा अहिले नेपालको सेयर बजारमा धेरै परिवर्तन भएको बताउछन् उनी । अहिले सेयर किनेको दोस्रो दिनमै लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । ब्रोकरहरुले भने हप्ता दिनमा मात्र सेयर बेचेको पैसा खातामा पठाउँछन् ।
यस्तै पहिले पनि लगानीकर्ताहरुले सेयर खरिद गर्दा ४-५ दिन भित्रमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम थियो । तर लगानीकर्ताहरुले सेयर बेच्दा भने ब्रोकरहरुले १०-१५ दिनमा मात्र भुक्तानी दिने गर्दथे । जुन गैरन्यायिक रहेको भन्दै दुबै पक्षले भुक्तानी गर्नुपर्ने दिन समान हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
विश्वमा नै अहिले सेयर बजार प्रविधिमैत्री भईरहेको भन्दै उनले अहिले नेपालको सेयर बजार पनि अनलाईनमा जानु धेरै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । उनले यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर जानुपर्नेमा जोेड दिए ।
एक पटक बर्षको डिम्याट खाता बापतको १०० रुपैयाँ शुल्क लिईसकेपछि हरेक कारोबारमा डिपी शुल्कबापत २५ रुपैयाँ शुल्क लिनु भनेको लगानीकर्ताहरुलाई मार्नु भएको बताउँछन् उनी । एउटै कारोबारमा पनि बिभिन्न शिर्षकमा लगानीकर्ताहरुबाट शुल्क असुल गर्दा लगानीकर्ताहरुलाई अन्याय भएको उनको बुझाई छ ।
कतिपय बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सिआस्वाबापत हरेक आईपिओमा आवेदन गर्दा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै यसलाई नियमन गरिनु पर्ने बताउँछन् उनी । सेयरधनीहरुले नै लगानी गरेर बैंकहरुलाई यो अबस्थामा बनाईदिएको भन्दै बैंकहरुले लगानीकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपालमा १० कित्ते प्रणालीले बजारमा बिकृति मौलाएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् । कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताहरुले त्यो कम्पनीले कस्तो काम गर्दै छ ? कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? भनेर कम्पनीको साधारणसभामा गएर व्यवस्थापनलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताउछन् उनि ।
उनै अनुभवी लगानीकर्ता श्रेष्ठसँग गरिएको भिडियो कुराकानीः